Akụkọ - Akparamagwa nke Nsụgharị Dị Iche Iche Nke Women Down Down Jaketị
Uwe oyi na-atụ uwe
Downmụ nwoke Down / Cotton Padded Jacket
Thinmụ nwoke dị mkpa Cotton / Windbreaker
Uwe oyi mkpuchi ụmụ nwanyị
Downmụ nwanyị Down / Cotton Padded Jacket
Thinmụ Nwanyị Dị Mkpa Cotton / Windbreaker
Njirimara Of Versions Dị Iche Iche Nke Women SI Down Jaketị
Pịnye A na-egosipụta profaịlụ uwe site na uwe na uwe na-enweghị úkwù, ma ọ bụ obere eriri n'úkwù, na oghere sara mbara. Ọ nwere ike ịkọwa ahụ dị elu ma ọ bụ n'úkwù, ma kpuchie afọ gị, jiri anya mee ihe iji nweta nsị, zoo ntụpọ ahụ. Nchịkọta zuru ezu dị mfe ma doo anya. Mediumdị ụdị A na-ajụ ogologo nwere mmetụta dị mma nke ahụ mmadụ, nke nwere ike ịkọwa ụkwụ nwanyị dị gịrịgịrị. Na mkpokọta, uwe A-ụdị silhouette ga-emepụta ihe mara mma, nke dị nro na nke ntorobịa maka ụmụ nwanyị, nke nwere mmekọrịta ịhụnanya na ịdị ọcha.
H-ụdị uwe profaịlụ, makwaara dị ka igbe profaịlụ, e ji ogologo na ala na-etolite a akụkụ anọ ngwe, ekpuchi akụkụ nke obi, n'úkwù na hip, wdg Ọ dịghị n'úkwù akara, dị ọcha ma idiocha version, na-eweta izuike na mara mma ike mara mma, nke ọma na nkịtị. Uwe H-ụdị dị ezigbo mma na mkpokọta. Site na njirimara nke ogologo na ala, ọ na-eme ka ndị mmadụ dị gịrịgịrị ma maa mma, ma na-egosipụta ụdị dị iche iche.
O-ụdị uwe profaịlụ bụ profaịlụ a ma ama nke na-ekpo ọkụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Eleghara anya n'úkwù akara, n'úkwù mmeba pụta ìhè guputa nlereanya, ọ bụghị ikwubiga okwu ókè hemline na ubu akara, ka dum iche mmetụta nke yiri olive udi ma ọ bụ silkworm akwuru, ọ bụ oké mkpa joker mpempe akwụkwọ na oyi na-atọ. Ga-ekwe ka ndị inyom na-egosi oke iwe, na-atọ ụtọ pụrụ iche; Ma ọ bụ mepụta ochie ochie mara mma. Na mgbakwunye, n'ihi profaịlụ a na-agbasawanye nke uwe akwa, ọ nwere ike igwu egwu mmetụta dị mma, ya mere akwa cocoon dị mma iji kpuchie ntụpọ nke ahụ mmadụ.
X bụ akwa mkpuchi akwa maka ụmụ nwanyị ejiji. X bụ site ubu (gụnyere obi) ozi na ọnụ ọgụgụ na-emebiga ihe ókè, a na-eme ka úkwù ahụ sie ike, nke mere na ọdịdị ahụ na-egosi ma na-agbada akụkụ rụrụ arụ, obere ihe atụ. Ọ dị oke aka ịkwado ahịrị nwanyị, yana ụzọ eji ejiji n'úkwù na-emesi ike ịdị na nhazi nke ahụ, nke dabara na akụkụ mara mma nke nwanyị. Yabụ X bụ oge ụmụ nwanyị na-achọ silhouette.
Post oge: Mar-25-2021
Ekwentị ： +86 13522355655
Adreesị ： 30lọ 3082, Tianya Clothing Market, No.2 Yabao Road, Chaoyang District, Beijing, China
ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị heer